Ifilosofi Yokutya - Indlela Eyiyo Yokutya
Izikhokelo zendlela echanekileyo yokutya
Umbuzo omhle wefilosofi unokuvela naphi na. Ngaba uke ucinge, umzekelo, ukuba ukuhlala esidlweni sakusihlwa okanye ukuhamba ngevenkile kunokusebenza njengesingeniso esihle kwiingcinga zefilosofi? Leyo yiyo ifilosofi eyona nto iphambili.
Yintoni ifilosofi malunga nokutya?
Ifilosofi yokutya ifumana isiseko sayo kwimbono yokuba ukutya kuyisibuko. Kusenokwenzeka ukuba ulivile ilizwi elithi 'siyinto esiyidlayo.' Ewe, kukho enye into ekubhekiselele kulo mbandela.
Ukutya izibuko ukwenza ngokwakho, oko kukuthi, iinqununu zezigqibo kunye neemeko ezenza ukuba sidle ngendlela esenza ngayo. Kuzo, sinokubona sibonakalisa umfanekiso ocacileyo kunye nobanzi. Ifilosofi yokutya ibonakalisa kwimilinganiselo yokuziphatha, ezopolitiko, ezentlalo, ezobugcisa, ezichazwe ngabanikazi. Ikhupha kumngeni ekujongeni ukucinga ngokutya kunye neendlela zokutya ukuze siqonde ukuba ngubani esisezantsi, ngendlela echanekileyo.
Ukutya kulamano. Into ethile kukutya kuphela ngokubhekiselele kwimizimba ethile, kwiimeko zeemeko. Ezi zinto, okokuqala, zizahluka ukusuka emzuzwana ukuya komzuzwana. Ngokomzekelo, ikhofi kunye ne-pastry yinto yokutya efudumele okanye i-snack; kodwa, ininzi lethu asinakuxhamla isidlo sakusihlwa. Okwesibini, iimeko zimele zibandakanye imigaqo ebonakalayo, ingqinelaniyo. Yithi, uyeka ukutya kwesoda ekhaya, kodwa kwi-bowling alley, ujabulela enye.
Kwivenkile, uthengela kuphela inyama engekho inyama, kodwa eholide, unqwenela uMcBurger ngefries. Ngaloo ndlela, naluphi na 'ulwalamano lokutya' olunikwe kuqala kunye nesipilisi somntu odlayo: kuxhomekeka kwiimeko, limela iimfuno zabadla, imikhwa, ukukholelwa, ukucinga, kunye nokunciphisa.
Mhlawumbi iinkalo zefilosofi ezicacileyo zokutya kwethu zikholo zokuziphatha eziyilo. Ngaba ungadla ikati? Umvundla? Kutheni okanye kutheni? Kungenzeka ukuba izizathu ozinikezelayo zigxilwe kwimigangatho yokuziphatha, njengale: "Ndiyathanda amakati amaninzi ukuba ndiyidle!" Okanye nokuba "Unokwenza njani into enje!" Okanye, qwa lasela i- vegetarianism : inani elikhulu abo bavumelana nale ndlela yokutya banjenjalo ukukhusela ubundlobongela obungenakulungelelwanga bwenziwa kwizilwanyana ngaphandle kobuntu. Kwi- Animal Liberation , uPeter Singer obizwa ngokuthi "i-speciesism" isimo sengqondo salabo abahlula ngokungafanelanga phakathi kweHomo sapiens kunye nezinye iintlobo zezilwanyana (njengobandlululo bubeka ukungafani okungafaniyo phakathi kohlanga olunye kunye nabanye). Ngokucacileyo, ezinye zezo mithetho zidibene nemigaqo yezenkolo: ubulungisa kunye nezulu ziya kuhlangana ndawonye kwitheyibhile, njengoko kwenza kwezinye iimeko.
Ngaba ukutya kunokuba bugcisa? Ngaba umpheki unokufuna ukuba ngumculi kwi-Michelangelo, uLeonard noVan Gogh ? Lo mbuzo uye wabangela iingxoxo ezifudumeleyo kule minyaka edlulileyo. Abanye bathi ukutya kuku (ngokufanelekileyo) ubugcisa obuncinane. Izizathu ezintathu ezibalulekileyo. Okokuqala, kuba ukutya kukufutshane ngokuthelekisekisa, umzekelo, izixhobo zeemabula.
Okwesibini, ukutya kukuxhomekeke kwinjongo efanelekileyo-ukutya. Okwesithathu, ukutya kuxhomekeke kumgaqo-siseko wezinto eziphathekayo ngendlela umculo, upende, okanye umzobo. Ingoma efana ne "Izolo" ikhishwe kwi-vinyl, ikhasethi , i-CD, kunye ne- mp3 ; ukutya akukwazi ukuhanjiswa ngokufanayo. Abapheki abalungileyo baya kuba ngabachwephezi abalungileyo; banokubambisana nabanxibi bezinwele okanye abagadi bezakhono. Ngakolunye uhlangothi, abanye bacinga ukuba lo mbono awufanelekanga. Iipoksitsha zisandul 'uqalise kwimiboniso yezobugcisa kwaye oku kubonakala ngathi ukuchasisa ngokuthe ngqo ukuthetha kwangaphambili. Mhlawumbi inqaku elidumileyo kwinqanaba likaFerran Adrià, umkhangeli waseCatalan oguquke umhlaba wokupheka kwiminyaka emithathu edluleyo.
AmaMelika ahlala ehloniphekileyo indima yeengcali zokutya; AbaFrentshi nabaseTaliyane bayayiqaphela ngokungaqhelekanga.
Mhlawumbi, ngenxa yeendlela ezahlukeneyo zokujonga ukusetyenziswa kokutya. Ngaba loo mpuphu ye-onion yaseFransi iyinyani? Ukuhlaziywa kuthi iwayini inhle kakhulu: ngaba kunjalo? Ukutya okanye ukunambitha iwayini ngokuqinisekileyo ngumsebenzi wokuzonwabisa, kwaye uyintetho yokuqala. Sekunjalo, ngaba kukho inyaniso xa kuziwa kwizigwebo malunga nokutya? Le ngenye yeengxaki ezifihlakeleyo zefilosofi. Kwisicatshulwa sakhe esidumileyo "Sokomgangatho Wokutya", uDavid Hume ubonisa ukuba umntu unokuthandwa njani ukuphendula "Ewe" kunye "Hayi" kulo mbuzo. Ngakolunye uhlangothi, amava amnandi akusiwo akho, ngoko ke ngokupheleleyo; kwelinye, unikezele ngezinga elaneleyo lobuchule, akukho nto inqabileyo ukucinga ukuba inselele imbono yombuyekezi ngewayini okanye kwindawo yokutyela.
Ukutya okuninzi esikuthengayo kwivenkile kufaka iilebula zabo "izondlo zokutya". Sisebenzisa ukuze sikhokele ekudleni kwethu, ukuhlala sempilweni. Kodwa, loo manani kufuneka ayenze ngokwenene izinto esinazo phambi kwethu nangesisu zethu? Ziziphi "iinyaniso" ezisinceda senze ngokuqinisekileyo? Ingaba ukutya okunokutya kunokuthathwa njengenzululwazi yesendalo ngokumalunga nayo kunye ne-biological cell? Kubabhali beembali kunye nefilosofi zesayensi, ukutya kuyindawo ehlabayo yophando kuba iphakamisa imibuzo ebalulekileyo malunga nokuqinisekiswa kwemithetho yendalo (ngaba siyayazi nawuphi na umthetho ngokubhekiselele kwimetabolism?) Kunye nesakhiwo sophando lwezenzululwazi (oxhasa iimali kwi- izondlo ezitholayo kwiibhile?)
Ukutya kwakhona kwinqanaba lemibuzo yezimali malunga nefilosofi yezopolitiko.
Nazi ezinye. Nye. Imingeni yokusetyenziswa kokutya kubangela ukusingqongileyo. Ngokomzekelo, ngaba uyazi ukuba ukufama kweefama kubangele izinga eliphezulu lokungcola kunokuba uhambo lwama-airfare? Mbini. Ukuthengiswa kokutya kukuphakamisa imiba yobulungisa kunye nobulungisa kwimarike yehlabathi. Iimpahla ezingekho phantsi kwezinto ezifana nekofi, itiye kunye necoleta ziyimimandla ephambili: ngembali yezentengiselwano yabo, singakwazi ukuhlaziya ubudlelwane obunzima phakathi kwamazwekazi, amazwe kunye nabantu ngaphezu kweenkulungwane ezintathu ezidlulileyo. Ntathu. Ukuveliswa kokutya, ukuhanjiswa, kunye nokuthengisa kuyithuba lokuthetha ngomqathango wabasebenzi emhlabeni wonke.
Ukutya kunye nokuziqonda
Ekugqibeleni, njengoko umntu oqhelekileyo engena kubuncinane 'ubudlelwane bokutya' ezimbalwa ngosuku, ukungafuni ukucinga ngokutya ngendlela enentsingiselo kunokufaniswa nokungabikho kokuqonda okanye ukungabi nanyaniso. Ekubeni ukuziqonda kunye nokunyaniseka ziphakathi kweenjongo eziphambili zokuphanda ngefilosofi, ngoko kukutya kuba yinto ephambili yokuqonda kwengqondo. Inqununu yefilosofi yokutya yilapho ifuna ukutya okunyanisekileyo , umbuzo onokuthi ulungele ngokuhlaziya ezinye iinkalo 'zobudlelwane bokutya'.
Ubomi bezobufilosofi: Ulwazi ngoLwazi
Indlela yokudibanisa "ukuhla" (ukuhla, ukuhla)
Inkqubo yeLimbic yeBongo
Iimithi eziMnandi kakhulu ezifanele ukutyala
"Kutheni Kwafuneka Ukuba Yizinyoka?" Eyona ndlela ihamba phambili 'I-Indiana Jones' yeComment Quotes
Ngaba Ndifanele Ndizuze iSikolo seMatriki?
Amagama aqhelekileyo adidekile: Hoard noHorde
Iingoma eziphezulu zeR & B zika-2007
Ukuphela koBandlululo lwaseMzantsi Afrika
I-Best Contemporary Traditional yaseScottish Music
Ngaba iAnanfple yenza i-Oral Sex Taste Better?
Imbali ye-Atomic Theory
I-Covalent Radius Inkcazo
Udweba Usuku: 31 Iingcamango
Ukuba ne-Have and Not
UGeorge Catlin, uPainter wamaNdiya aseMerika
Ukukhetha isihloko esinzulu soPhando